Posted by Tranquillus | Mar 22, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Inta udhaxeysa nuxurka iyo foomka, dad badan ayaa u kala gar qaata inay mid ama mid kale u xagliyaan. Xaqiiq ahaan, maheysid raaxadaas haddii aad rabto inaad xirfadle ahaato. In kasta oo nuxurku ka marag kacayo kartidaada, in badan oo foomka ah ayaa ka warramaysa halistaada iyo xushmadda aad u leedahay akhristayaashaada. Marka, waa inaad tixgelisaa xaddidaadyo badan oo suurtogal ka dhigaya inaad soo bandhigto qoraal aan fiicnayn oo kaa dhigaya inaad rabto inaad wax akhrido.
Qaddarintii ugu horreysay ee muuqaal ah
Akhristaha xirfadlaha ah, iyo xitaa hiwaayadda, ayaa loo qaabeeyey si uu u arko foomka ugu horrayn intaanad aadin salka. Sidaa darteed, wuxuu leeyahay dib-u-habeyn uu ku shaqeynayo koorso muuqaal ah kor ilaa hoose iyo bidix ilaa midig. Dhowr ilbiriqsi gudahood, akhristaha wuxuu ku qanacsan yahay tayada qoraalka. Qiimeyntan si dhib yar ayaa dib looga noqon doonaa xitaa haddii tayada asalka ay jirto. Tani waxay sharraxaysaa muhiimadda qaabeynta, adeegsiga ereyada qaarkood, galinta sawirrada, iwm. Tani waxay sidoo kale sharraxaysaa booska cinwaanka ee dusha sare iyo iswaafajinta dhammaan hoosaadyada dhinaca bidix ee bogga.
Isticmaalka dufanka iyo dufanka
Isticmaalka dufanka iyo dufanka waxay raacaan caqli gal ah xoog. Xaqiiqdii, isha ayaa soo jiidata wax kasta oo leh xoog ka xoog badan cufnaanta, taas oo ah sababta aan u dhigno ballaadhan ama geesinimo cunsurrada aan dooneyno inaan ku soo jiidanno dareenka. Marka la eego qaabka qorista, tani waa kiiska cinwaanada iyo cinwaannada oo noocyo waaweyn ah iyo hordhaca iyo gabagabada oo geesinimada leh. Waxaa jira xeelad ay xirfadlayaal badan adeegsadaan inta lagu gudajiro habeynta erayga, taasna waa in loo adeegsado nooc kale, oo aad loogu dhawaaqo cinwaannada iyo cinwaannada.
Caddaanku waxay tixraacayaan astaamaha qoraallada ee bixiya macluumaad ku saabsan kala duwanaanshahooda xagga xoogga. Kuwani waa xariiqyo xariijin, jajab bog, meelo. Tani waa waxa u oggolaanaya dukumiintiga inuu neefsado oo uu ku ciyaaro aragtida akhristaha ee dukumintiga. Sidaas awgeed waxaa la tilmaamay in laga boodo xariiq iyada oo cinwaan la dhigayo iyada oo aan la kordhin cabbirka xarfaha inta badan halkii laga fulin lahaa kororkan laakiin loo daayo iyada oo la isku cadaadinayo bartamaha qoraalka.
Adeegsiga jaranjarooyinka dhulka
Qoraalkaagu ma aha shaqo farshaxan sidaa darteed kuma xadgudbi kartid jaranjarooyinka qaab dhismeedka. Waxay la mid noqon laheyd filim leh saameyn gaar ah oo aad u badan. Ugudambeyn qofna si dhab ah ugama qaado. Marka, waa inaad doorataa dheelitirka oo aad ka fogaataa adeegsiga qaabab badan oo kala duwan. Ku habboon ayaa noqon doonta hal ama laba nooc.
Intaa waxaa sii dheer, waa in la ogaadaa in galinta sawirada ay noqon karto qiime weyn oo lagu daray qoraalka haddii sifiican loo sameeyo. Haddii kale, saameynta ka soo horjeedda ayaa la helaa. Tani waa sababta ay tahay inaad u qiimeyso ku habboonaanta sawirka oo aad u isticmaasho qaabab midab leh haddii ay suurtagal tahay.
Ugu dambeyntiina, dhammaan sharciyadan waa in lagu daraa si caqli iyo dheellitiran leh maxaa yeelay haddii aad rabto inaad tooshka dusha ka saarto waxyaabo badan isla markiiba wax waliba waxay noqonayaan wax aan caadi ahayn. Marka waxaa lagugu qasbay inaad wax doorato.
Macallimow nuxurka iyo foomka qoraalkaaga 22-kii Maarso, 2021Tranquillus
horeXil ka qaadis iyo xaalado cakiran: shaqaalahaaga ma dalban karaa magdhow xitaa haddii khaladku sabab yahay?
socdaWada shaqaynta: qorshe hawleedka horjoogeyaasha si loo xoojiyo waxtarka racfaankiisa